ဘုရားရှင်ဟာဝေသာလီပြည်ကထွက်တော်မူပြီးသာဝတ္ထိပြည်ဘက်ကိုခရီးဒေသစာရီ ကြွချီတော်မူခဲ.ပါတယ်။ လမ်းခရီးအကြားမှာ ဆဗ္ဗဂ္ဂီ ရဟန်းတွေရဲ. တပည်.တွေဟာ ဘုရားအမှူးရှိတဲ. သံဃာတော်ရဲ. အရင်သွားနှင်.ကြပြီး ဒီကျောင်းအိပ်ရာ နေရာတွေဟာ ငါတို.ရဲ. ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာ တွေအတွက် နေထိုင်ရန် ဖြစ်လိမ်.မယ်၊ ဒီကျောင်းအိပ်ရာ နေရာတွေက ငါတို.ရဲ. နိဿရည်းဆရာတွေအတွက် နေထိုင်ရန် ဖြစ်လိမ်.မယ် လို. ပြောဆိုကာ ကျောင်းကောင်း အိပ်ရာနေရာကောင်းတွေကို ယူထားနှင်.ကြပါတယ်။
တပည်.သံဃာတွေနဲ.အတူ ဘုရားရှင် ခရီးကြွတဲ.အခါတွေမှာ အရှင်သာရိပုတ္တရာဟာ ငါဟာ လက်ယာရံ အဂ္ဂသာဝကကြီး ဖြစ်တယ် လို. ကိုယ်လွတ်ရုန်းကာ တစ်ကိုယ်ကောင်းစိတ်ထားနဲ. ဘုရားရှင်ရဲ.အနီးမှာ လိုက်ပါနိုင်ခွင်. ရှိပေမယ်. အဲ.ဒီလို ပြုလုပ်လေ.မရှိဘဲ နောက်က လိုက်ပါကြတဲ. မကျန်းမာတဲ. ရဟန်း၊ သက်ကြီးရွယ်အို ရဟန်းတွေ ချမ်းချမ်းသာသာ လိုက်ပါနိုင်ရေးအတွက် ကိုယ်တိုင်ပဲ စီမံစောင်.ရှောက် ချီးမြှောက်ကူညီပြီး လိုက်ပါလေ.ရှိပါတယ်။ ဒီခရီးမှာလည်း အဲ.ဒီလို လုပ်ကာ နောက်ဆုံးက လိုက်ပါခဲ.ပါတယ်။ ဒါကြောင်. ဆဗ္ဗဂ္ဂီ ရဟန်းတွေရဲ. တပည်.ရဟန်းတွေ ကျောင်းအိပ်ရာ နေရာတွေကို သိမ်းယူထား ပြီးနောက်မှ တည်းခိုရာ သို. ရောက်ရှိပါတယ်။ အရှင်သာရိပုတ္တရာ အိပ်ရာနေရာကို မရရှိတော.လို. တစ်ညလုံးပဲ သစ်ပင်ရင်းမှာ နေထိုင်ရပါတယ်။
မကျန်းမာတဲ. ရဟန်း၊ သက်ကြီးရွယ်အို ရဟန်းတွေကို စောင်.ရှောက်ချီးမြှောက် ကူညီတာ ဘုရားအမှူးရှိတဲ. သံဃာများရဲ.နောက်ဆုံးက လိုက်ပါခဲ.တဲ. လက်ယာရံအဂ္ဂသာဝကကြီး အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ. ကြီးမာလှတဲ. မေတ္တာ၊ ကရုဏာနဲ. အိပ်ရာနေရာ မရတော.လို. တစ်ညလုံးပဲ သစ်ပင်ရင်းမှာ နေထိုင်ရတဲ. အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ. ကြီးမားလှတဲ. ခန္တီတွေ မွှမ်းထုံထားတဲ. အရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးရဲ. လုပ်ရပ်တွေဟာ ကြားသိရသူ အပေါင်းရဲ.ရင်ကို အေးမြစေပါတယ်။
ဘဝအခြေအနေ မြင်.လာလေလေ အများအကျိုးကို ဆောင်နိုင်လေလေဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြ လို.လည်း တိုက်တွန်းပြောပြနေသယောင် ထင်မှတ်ရပါတယ်။ မြင်.မားတဲ. စိတ်ထားရှိသူတွေရဲ. လုပ်ရပ်တွေကို အတုယူကာ လိုက်နာကျင်.သုံးပြီး မြင်.မားတဲ. စိတ်ထားရှိသူတွေဖြစ်အောင် ကြိုးစားသင်.ကြပါတယ်။
သာမဏေကျော်၏ အတုယူဖွယ်စိတ်ထားများစာအုပ်မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြ ထားခြင်းပါတယ်။
Posted by မောင်မောင် at 23:39